Mariela Carril | | အိႏၵိယ, အာရှခရီးသွားခြင်း
ခရီးသွားတစ် ဦး ၏စိတ်ဝိညာဉ်နှင့်အတူမည်သူမဆိုသည်ကမ္ဘာ့မြေပုံကိုကြည့်ပြီးအိန္ဒိယတိုက်ငယ်ကိုတစ်ကြိမ်ထက်မကကြည့်ခဲ့သည်။ အဲဒါပါ စွန့်စားမှုနှင့်ချွေတာခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်ကောင်းမွန်သော ဦး တည်ရာ။
ကမ္ဘာ၏ဤအပိုင်းကိုသမိုင်းကြောင်းအရလူသိများသည် အဆိုပါ Hindustan ကျွန်းဆွယ် တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, ၎င်းသည်အလှအပ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းကြောင်းများစွာရှိသောပြည်ဖြစ်သည်။ လူအများစုကဒီမှာရာသီတစ်ခုနှင့်မင်းရဲ့ဘဝဟာထာဝရပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ပြောကြတယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကိုအံ့ ers စရာတွေဘာတွေစောင့်ကြိုနေတာလဲကြည့်ရအောင်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်းဆွယ်သည်အိန္ဒိယတိုက်ငယ် မှလွဲ၍ ပထ ၀ ီနိုင်ငံရေးအရဖွဲ့စည်းထားသည့်တိုင်းပြည်ခုနစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယ၊ သီရိလင်္ကာ၊ ဘူတန်၊ နီပေါ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ၊
ယနေ့တွင်ဟိန္ဒူစတန်ဟူသောစကားလုံးကိုမသုံးပါ။ သို့သော်မည်သည့်သမိုင်းဝင်ကျောင်းသားမဆိုဤခေါ်ဆိုမှုကိုဤနေရာတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိထားသည် indostanic ယဉ်ကျေးမှုအာရှ၏ယဉ်ကျေးမှုများနှင့်အလွန်ကွာခြားသည်။ တကယ်တော့, နာမည်ကအရမ်းဟောင်းတယ် နှင့်ပါရှားပြီးသားကအသုံးပြုခဲ့သည်။
စုစုပေါင်းရပ်ကွက်နီးပါးပါဝင်သည် လေးသန်းခွဲစတုရန်းကီလိုမီတာ။ ၁၉၄၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကကျွန်းဆွယ်ကိုဖျက်သိမ်းသည်အထိဥရောပဒေသတွင်ဗြိတိသျှအိန္ဒိယဟုလူသိများခဲ့သည်။
ကိုလိုနီအင်အားကြီးနိုင်ငံများမှဆုတ်ခွာသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်နယ်မြေ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းသည်သေးငယ်သည့်ပြည်နယ်များသို့ပြိုကွဲသွားသည်။ ဒီနေ့စကားလုံး တိုက်ငယ် ငါတို့သိသင့်ပေမယ့်ငါတို့အကျွမ်းတဝင်အသံ ဤသည်စကားလုံးကိုအသုံးပြုသည်ကမ္ဘာ၏တစ်ခုတည်းသောထောင့်ဖြစ်ပါတယ်.
ဒီကျွန်းဆွယ်ဒေသဘယ်လိုနေလဲ ဘယ်လိုသဘာဝရှုခင်းတွေရှိပြီးရာသီဥတုကဘယ်လိုလဲ။ လူတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး သည်ယဉ်ကျေးမှုများကိုအမြဲတမ်းပုံသွင်းကြောင်းသတိရပါ။
မြောက်ဘက်တွင် ဟိမဝန္တာ နှင့် အာရေဗျပင်လယ်တောင်ဘက်သို့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် Emilio Salgari ၏ Sandokan သည်ပင်လယ်ကိုရွက်လွှင့်ခဲ့သည်။ နောက်ထပ်တောင်တန်းတစ်ခုဖြစ်သည် ဟိန္ဒူတစ်ဖက်မှအာဖဂန်နစ္စတန်၊ အနိမ့်ဆုံးလည်းရှိပါတယ် တောင်တန်းများ Suleiman.
အိန္ဒိယသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်ကိုသင်သိသောအခါ၊ လူ ဦး ရေသိပ်သည်းမှုသည်အလွန်များပြားသည်။ အဲဒါကိုလူသိများပါတယ် လူ ဦး ရေ ၃၅၀ ခန့်သည်တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာမျက်နှာပြင်တွင်နေထိုင်ကြပြီး ၇ ဆမျှပိုများသည် eo ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပျမ်းမျှ.
ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံများ အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့်ပါကစ္စတန်တို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုကိုရယူသည်သို့သော်အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်အလုပ်များစွာကိုထောက်ပံ့ပေးသောအဓိကကဏ္ sector ဖြစ်သည်။ ငါပြောတယ် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး (အများအားဖြင့်ဝမ်းစာ), အ ကျွဲနွားမွေးမြူရေး နှင့် သစ်ထုတ်လုပ်ရေး.
လက်ဖက်၊ ဝါ၊ ဆန်၊ ဂျုံ၊ ပြောင်းဆန်၊ နှံစားပြောင်း၊ ပဲပုပ်၊ ကော်ဖီနှင့်ကြံကြံဒေသသည်အဓိကသီးနှံများဖြစ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းလား။ ကောင်းပြီ၊ အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်တို့တွင်ပိုမိုပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးပြီး၊ အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းနှင့်ဖိနပ်လုပ်ငန်းအတွက်စက်ရုံများစွာရှိသည်ဥပမာသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းသည်တိုးတက်လာသည် ပါကစ္စတန်၊ အနည်းဆုံးစစ်ပွဲမတိုင်မီအထိဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) သည်ယခုအချိန်တွင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သောဆေးဝါးနှင့်ရေနံလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအများစုကိုဆွဲဆောင်သည် ၎င်း၏အိမ်နီးချင်းအချို့၏နိုင်ငံရေးအခြေအနေ visitors ည့်သည်များကိုဆွဲဆောင်ပါဘူးကတည်းက။ ယဉ်ကျေးမှုဟောင်းများ၏ရှေးဟောင်းသုတေသနအကြွင်းအကျန်များနှင့်၎င်း၏ရှုခင်းများ၏လှပမှုနှင့်မတူကွဲပြားမှုများအားလူတိုင်းအသုံးပြုသင့်သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံသည်အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည် နှင့်ဒီမှာလူ ဦး ရေပိုနှင့်အတူ။ ၎င်းသည်တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီးစတုရန်းကီလိုမီတာ ၃,၂၂၇,၅၉၀ အကျယ်ရှိသည်။ ၎င်း၏ကမ်းရိုးတန်းသည် ၇,၀၀၀ ကီလိုမီတာရှည်လျားပြီးနယ်နိမိတ်လေးထောင်ကျော်ရှိသည်။
အိန္ဒိယ၊ မြန်မာ၊ တရုတ်၊ ဘူတန်၊ နီပေါ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ပါကစ္စတန်၊ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနှင့်အာရေဗျပင်လယ်တို့နှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။ ၎င်း၏မြို့တော်နယူးဒေလီ သင်ဝင်ရန်ဗီဇာလိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်ရှိပါသည် ကာကွယ်ဆေး- အသည်းရောင်ရောဂါ (ပိုးအေ) နှင့်ဘီ၊ အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါ၊ မေးခိုင် - ဆုံဆို့နာနှင့်အခြားအချို့သောရောဂါများ။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသည်အထီးကျန်သောဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်သည် အိန္ဒိယနှင့်မော်လ်ဒိုက်များနှင့်ရေကြောင်းနယ်နိမိတ်ရှိသည်။ ၎င်း၏လူ့သမိုင်းသည်အနည်းဆုံးနှစ်ပေါင်း ၁၂၅၀၀၀ ရှိခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှအစိုးရလက်ထက်က၎င်းကိုလူသိများခဲ့သည် သဇင်အလွန်ကြီးစွာသောလက်ဖက်ရည်ထုတ်လုပ်သူ.
ခိုင်မာပြီးရှေးဟောင်းဗုဒ္ဓဘာသာထုံးတမ်းစဉ်လာရှိသော်လည်းဘာသာတရားများနှင့်ဘာသာစကားများသည်ဤတွင်များစွာရှိသည်။ ၎င်း၏မြို့တော်သည်ကိုလံဘိုဖြစ်ပြီးကျွန်းသို့ခရီးစဉ်တွင်ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်အဖြစ်ကြေငြာထားသောရောင်စုံနံရံဆေးရေးပန်းချီကားများနှင့်အတူ ၁၂ မီတာအမြင့်ရှိ Avukana, Sigiriya ခံတပ်ခံကျောက်တန်းပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။နိုင်ငံအတွင်းအိမ်ခြံမြေခုနစ်ခုရှိသည်) သို့မဟုတ် Polonnaruwa ၏ရှေးဟောင်းမြို့။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ထက်ပိုမို 166 သန်းနေထိုင်သူနှင့်အတူတစ်သမ္မတနိုင်ငံ။ ၎င်း၏တရားဝင်ဘာသာစကားမှာဘင်္ဂါလီဖြစ်သည်။ အာရှ၏အရှည်ဆုံးမြစ်သုံးမြစ်သည်မြစ်ဆုံများဖြစ်သောဂင်္ဂါများ၊
လည်း ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဒီရေတောများအများဆုံးရှိသည်မိုးသစ်တောများအလယ်တွင်လက်ဖက်စိုက်ခင်းများနှင့်ကီလိုမီတာ ၆၀၀ ရှည်လျားသောကမ်းရိုးတန်းရှိသည် ကမ္ဘာပေါ်မှာအရှည်ဆုံးကမ်းခြေကျွန်းများနှင့်သန္တာကျောက်တန်းကောင်းများရှိသည်။
ပါကစ္စတန် ၎င်းသည်လှပပြီးစိတ်ရှည်သောတိုင်းပြည်၏နောက်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒါက အစ္စလာမ္မစ်သမ္မတနိုင်ငံ သန်း 190 ကျော်နေထိုင်သူနှင့်အတူ။ ၎င်း၏တည်နေရာသည်၎င်းကိုကမ္ဘာ့ဘုတ်အဖွဲ့တွင်အဓိကကျစေပြီး၎င်းအတွက်ပေးဆပ်သည်။
နှစ်ဆယ်ရာစုအလယ်ပိုင်းတွင်သူသည်လွတ်လပ်မှုကိုရရှိခဲ့ပြီးအရေးပါသောသူဖြစ်လာခဲ့သည် မူဆလင်ပြည်နယ်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင်ပြည်တွင်းစစ်စတင်ခဲ့ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမွေးဖွားလာခဲ့သည်။ အဆက်ဆက်စစ်တပ်အစိုးရများ၊ သူတို့၏အနုမြူလက်နက်များ၊ ကက်ရှမီးယားစစ်ပွဲနှင့်အိန္ဒိယနှင့်ပfrိပက္ခတို့က၎င်းကိုထုတ်ဖော်ရန်ခက်ခဲပြီးမပြောရလောက်အောင်အမှုန့်အိုးတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ လည်ပတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ.
ဘူတန် ၎င်းသည်သမ္မတနိုင်ငံမဟုတ်သော်လည်းနိုင်ငံတော်တစ်ခုဖြစ်သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစည်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ်။ ပင်လယ်ထဲထွက်ပေါက်မရှိဘူး ဟီလာယာယာတောင်တွေမှာပါ။ ၎င်း၏မြို့တော်မှာတိဘူမြို့ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည် ကမ္ဘာ့အသေးငယ်ဆုံးနှင့်လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးနိုင်ငံများသန်းတစ်ရာမပြည့်ခင်။
ခရီးသွားများသည် ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်များက စတင်၍ ဘူတန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ယနေ့တွင်သူတို့သည်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအားပေးအားမြှောက်မပြုသော်လည်း၊
visitors ည့်သည်များကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အံ့ဖွယ်ရှုခင်းများ၊ ဘာသာရေးပွဲတော်များနှင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းများဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်မထွက်ခွာမီဗီဇာကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
နီပေါသည်ဖယ်ဒရယ်သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်သည် ဒီဟာပင်လယ်ထွက်ပေါက်လည်းမရှိပါဘူး ဘူတန်နှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်မှုမရှိသော်လည်း ၂၄ ကီလိုမီတာရှည်လျားသောနယ်စပ်ဒေသရှိသည် ကြက်လည်ပင်း။
၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရဘုရင်စနစ်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်ပြင်းထန်သောပြည်တွင်းစစ်ပြီးနောက်ခေတ်သစ်တစ်ခုစတင်ခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်အလွန်ပြင်းထန်သောငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့သည်သေဆုံးသူရှစ်သောင်းကျော်နေတဲ့အတွက်သူပြန်နေကောင်းလာပြီ။
၎င်း၏ပထဝီသည်စတုဂံပုံဖြစ်သည်။ တောင်များအများကြီးရှိသည် သူသည်သူတို့တွင်မြင့်မားသောထိပ်များပိုင်ဆိုင်သည် Eveဝရက်တောင်။ နီပေါနိုင်ငံတွင်မုတ်သုံရာသီကိုရေတွက်သောကြောင့်၊ မတူညီသောဘာသာစကားပြောသောဘာသာတရားအမျိုးမျိုးကိုပြောဆိုသောသူများသည်အေးခဲသောတောင်များ၊ စိုစွတ်သောသစ်တောများ၊ ရာသီဥတုငါးခုရှိသည်။
Finalmente, မော်လ်ဒိုက်ကျွန်းသည်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိကျွန်းနှင့်အစ္စလာမ့်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏မြို့တော်မှာမလီဖြစ်ပြီး၎င်း၏ပထဝီဝင်သည်ကျွန်းပေါင်း ၁၂၀၀ ခန့်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ လူ ဦး ရေ ၂၀၀ သာနေထိုင်ကြသည်၊ သို့သော်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်လာပါကသူတို့သည်ထာဝရပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။
ဗြိတိသျှ၊ ပေါ်တူဂီနှင့်ဒတ်ခ်ျတို့သည်ဤတွင်ဖြတ်သန်းခဲ့ရသော်လည်း ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်များနှောင်းပိုင်း မှစ၍ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိဒီမိုကရေစီကြီးကြီးမားမားမဟုတ်သကဲ့သို့အာရှတိုက်တွင်လူ ဦး ရေအနည်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်အံ့မခန်းရှုခင်းများနှင့်ကမ်းခြေရှိပါတယ် ၎င်းသည်အထူးသဖြင့်ဥရောပသားများအကြားအလွန်ကောင်းမွန်သောခရီးသွား destination ည့်လမ်းညွှန်ဖြစ်သည်။ လူများစွာသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်နေထိုင်ကြသည် အပန်းဖြေစခန်းတစ်ရာကျော်ရှိတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အာရှခရီးသွားခြင်း » အိႏၵိယ » အဆိုပါ Hindustan ကျွန်းဆွယ်
ပဲရစ်မြို့ရှိ Saint Denis ခရိုင်